Zimbabwe presidential elections:E.D Mnangagwa wins|AllinZimbabwe.com
President Mnangagwa has won the Zimbabwe presidential elections, in an outcome set to fuel fraud allegations as security forces patrolled the streets to prevent protests.
Opposition MDC spokesperson Morgan Komichi has denounced Zimbabwe election results, saying the count was “fake”.
“The results that have been announced have not been verified by us so the results are fake,” said Komichi, before he was removed by police from the stage at the official results announcement in Harare.
The death toll in Zimbabwe has risen to six, according to police, after clashes in Harare on Wednesday that came amid delays in announcing the winner of this week’s presidential election.
Soldiers beat and shot at opposition protesters after Movement for Democratic Change (MDC) leader Nelson Chamisa claimed he had won the “popular vote” and accused Zanu-PF, the ruling party, of electoral malfeasance on Wednesday.
Police raided MDC offices and detained 18 people on Thursday. A search warrant suggested Mr Chamisa and others were suspected of the crimes of ”possession of dangerous weapons” and “public violence”; Mr Mnangagwa has publicly accused his opponent of inciting violence.
With all 10 provinces declared, Emmerson Mnangagwa won 50.8% of votes to 44.3% for opposition leader Nelson Chamisa.
In Mashonaland West, Chamisa received 217 732 votes and Mnangagwa received 312 958 votes.
In the Midlands province, Chamisa received 255 059 votes and Mnangagwa received 350 754 votes.
Chamisa narrowly took Manicaland after he got 296 429 votes and Mnangagwa 292 938.
Chamisa won in Matabeleland North receiving 137 611 votes while Mnangagwa gets 111 452 votes.
Mnangagwa also won in Masvingo province, Chamisa received 117 196 votes and Mnangagwa got 319 073 votes.
In Matabeleland South, Chamisa got 90 292 votes and Mnangagwa received 107 008 votes.
In Mashonaland East province, Chamisa received 189 024 votes and Mnangagwa 334 617 votes.
In Mashonaland Central Province, Chamisa got 97 097 votes while Mnangagwa 366 785 votes.
In Bulawayo Metropolitan province Chamisa got 144 160 votes and Mnangagwa 60 168 votes.
In Harare, Nelson Chamisa received 548 848 and Emmerson Mnangagwa 204 710 votes.
The Zimbabwe presidential elections were intended to set Zimbabwe on a new path following Mr Mugabe’s repressive rule.
Related Topics:FeaturedNelson ChamisaPoliticsPresident Emmerson MnangagwaZimbabwe Election 2018 Results
If Mnangagwa had won, he would have said so already:Chamisa